Truth Post Nepal | खुकुलो भयाे लकडाउन, के खुल्यो, के खुलेन ? यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णयहरू - Truth Post Nepal खुकुलो भयाे लकडाउन, के खुल्यो, के खुलेन ? यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णयहरू - Truth Post Nepal
खुकुलो भयाे लकडाउन, के खुल्यो, के खुलेन ? यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णयहरू
ट्रुथपोस्ट June 11, 2020
काठमाडाैं, २९ जेठ । सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै तत्काल सार्वजनिक सवारी सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले निजी सवारी साधन भने जोरबिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
यस्तै भौतिक दूरीलाई व्यवस्थित गर्न र भिडभाड कम गर्न निजी र सरकारी कार्यालय दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। तत्कालका लागि बिहान आठबजेदेखि दिउँसो एक बजेसम्म र दिउँसो १ बजेदेखि ६ बजेसम्म अर्को सिफ्टमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।
खतिवडाका अनुसार सवारी साधनमा चढ्दा गाडीको सिटको एकतर्फको सिटमा एकजना मात्र बस्नु पर्ने र मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ।
यस्तै अब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू पूर्ण रुपमा खुला हुने अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । यसअघि एक तिहाइ कर्मचारीहरूमात्रै राखेर बैंकहरूले सीमित शाखाबाट मात्रै सेवा दिइरहेका थिए भने अधिकांश जसो सहकारी संस्थाहरू बन्द थिए।
अब भने बैङ्कका सबै शाखाहरू खुला गरेर सेवा दिन पाउने खतिवडाले बताए । सरकारले शुक्रबारबाट लागु हुनेगरी लकडाउन खुकुलो बनाएको छ। तर विगतको जस्तो एउटै सिफ्टमा भने बैंकहरु चल्न पाउने छैनन् ।
सरकारले तत्काल सञ्चालन गर्न नमिल्ने विभिन्न क्षेत्रमाथि लकडाउनलाई निरन्तरता दिएको छ । जसमा शैक्षिक संस्थादेखि प्रदर्शन भेला र सम्मेलन, सपिङ महल,खेलकुद मैदान, शैलुन लगायत छन् ।
यी हुन् सञ्चालन गर्न नपाइने स्थान
-काठमाडौं उपत्यकाको हकमा उपत्यका भित्र र अन्य जिल्लाको हकमा सोही सम्बन्धित जिल्ला भित्र मात्र जोर बिजोर प्रणालीमा निजी सवारी साधन सञ्चालन हुने । अन्य क्षेत्रमा यो निर्णय लागू नहुने ।